प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने ! – Khabarhouse
प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने !
Khabar house | ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १६:५३ | Comments
काठमाडाै : सरकारको रेकर्डमा अहिले सम्ममा देउवाले उपचार खर्चको नाममा अहिलेसम्म कुनै सुविधा लिएको भने देखिएको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्नेमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री देखि प्रधानन्यायाधीश सम्मको लामै सूची रहेको छ । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले उपचार खर्च बापत एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएका समेत थिए ।
उपचार खर्च बापत ओलीले एक करोड २६ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । सदाचारी नेताका रूपमा चिनिएका पूर्व प्रधान मन्त्री स्व। सुशील कोइरालाले पनि एक करोड ८७ लाख रुपैयाँ लिएको देखिएको छ पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले राज्य कोषबाट नौ लाख ३० हजार उपचार खर्च लिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश राम कुमार प्रसाद साहले उपचार खर्च बापत ८० लाख रुपैयाँ लिएका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष रहेका डा। तुलसी गिरीले उपचार खर्च बापत २० लाख बुझेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पनि पाँच लाख रुपैयाँ लिएको देखि एको छ । कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले उपचारका लागि राज्यकोषबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएकी छन् । माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । कांग्रेस कै नेता एवं पूर्व मन्त्री खुम बहादुर खड्काले २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । जसपाका नेता पूर्व मन्त्री महेन्द्रराय यादवले १४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दर्जनौं सांसदले पनि राज्य कोषबाट उपचार खर्च लिएका छन् ।